China Ogwe Uhie Top 13000lm China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwe Uhie Top 13000lm - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ogwe Uhie Top 13000lm)
Ufo Elu Mmiri anyị dị 100w na-anapụta ihe dị 13000 lumens. Na-ere ọkụ n'oge ìhè 5000K, nke a Ufo High Bay 100w mee ka mmepụta ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ọ bụla na-arụ, ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ugbo, ụlọ ahịa ahịa na ihe ndị ọzọ! Ufo High Bay Lighting 100w ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe nhicha...
200W Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri nke Ọdụm Led 26000LM
Ụzọ 200w Na-aga n'ọdụ ụgbọ mpempe ọkụ bụ 26000 lumen mmepụta na ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala. Igwe Igwe a na- agba agba na-agba bọmbụ ọkụ Light Fixtures 200w nwere ike dochie 700 watt HPS / HID. Igwe igwe na- adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala E nwere agba ọla ma ọ bụ agba ojii na ebe ndị na - ekpuchi...
Nke a Led Street Light 100w na- eji ọkwá dị elu na ndị na-akwọ mmiri na-enweghị ihe ọ bụla na-eji eme ihe n'èzí. Okporo Ụzọ Anyị Led Street 100w Ahịa dị nnọọ asọmpi maka ị na-emekwu ego. Nke a Led Street Light Home Depot 100w nwere ike dochie 300 watt HPS / HID mmemme ọkụ. Mmiri ahụ na- eme ka ìhè gbaa...
Ogwe Uhie Top 13000lm Ogwe Uhie Top-13000lm Ogwe Uhie Top -18000lm Ogwe Uhie Elu - 3900lm Ogologo Ubi Ogige Uhie 13000lm Umu Ohu Ogige Uhie 3900lm Uhie Ohu Ogige Uhie Light 18000lm Ogige Uhie 13000 Mkpụrụ